देउवा सरकारमा प्रकाशमान सिंह उपप्रधानसहित गृहमन्त्री ! सपथ खुवाउने तयारी हुदै – Points Nepal
देउवा सरकारमा प्रकाशमान सिंह उपप्रधानसहित गृहमन्त्री ! सपथ खुवाउने तयारी हुदै
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०५, २०७८ समय: ९:०७:१८
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रकाशमानलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन देउवा तयार भएका हुन् । रक्षा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली रहेको अवस्थामा देउवाले मन्त्रिपरिषद हेरफेर तथा पूर्णता गर्न छलफल सुरु गरेका हुन्।
मंसिर अन्तिम साता भएको पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी देउवालाई नेता सिंहले दोस्रो चरणमा सहयोग गरेर निर्वाचित गराउन सहयोग गराएका थिए।
सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि देउवालाई ८२ मतको कमी भएपछि पुनः मतदान हुने भएको छ। पहिलो चरणमा देउवाले २२५८ मत प्राप्त गरेका गरे पनि खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउनुपर्ने विधानको अनुसार दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो। पहिलो चरणमा ३७१ मत पाएका सिंहले देउवालाई सहयोग गरेका थिए।
​सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि गठबन्धनभित्र विभिन्न थरिका प्रस्ताव आएकाले ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको बताउछन् । ‘स्थानीय निर्वाचनबारे विभिन्न विचार र प्रस्तावहरू आइरहेका छन्, गठबन्धनभित्र यी विचारमाथि छलफल भइरहेको छ’, कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी निर्वाचनकै पक्षमा छौ ।
आवधिक निर्वाचन गरेर जाने कुरामा सरकार प्रस्ट छ ।’ तर उनले एउटा, दुईटा तीनवटा निर्वाचन भन्दा एकैपटक गर्ने कि ? भन्ने कुरा आएकाले ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘धेरै कुरा आएकाले हामी ठ्याक्कै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौ । उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘मतदानमार्फत नै को सही ? को गलत भन्ने छुट्याउँछन् । कसैले म राम्रो भनेरमात्रै हुदैन । त्यो निर्वाचनमार्फत छुट्टिने हो । त्यसैले सरकार चुनाव रोक्ने पक्षमा छैन ।’
तत्कालिन नेकपाबाट विभाजित भएर बनेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो संगठन विस्तारकै क्रममा छन् । संगठन मजबुत नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पार्टीलाई घाटा हुने उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपी उनीहरुले यो कुरा बाहिर भने भन्न सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र समाजवादीको यो मनसाय बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
किनभने माओवादी र समाजवादीकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । सत्तारुढ दल समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल बैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘स्थानीय चुनावका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन’भुसालले भने, ‘अहिले समय पनि वितिसकेको छैन ।’
Last Updated on: January 19th, 2022 at 9:07 am